Indlela yokufaka iNew Golf Club Shaft Yakho
Indlela yokufaka iShaft entsha
Emva kokuba ukhethe i-shaft entsha , unokufumana isitolo sokulungisa iklabhu okanye uyifake. Ukuba uluhlobo oluthileyo, landela le nyathelo ukulungiselela i-clubhead kwi-shaft entsha:
Ukususa i-Old Shaft
Umthi omdala - okanye nayiphi na eyasalayo - kufuneka isuswe entloko. Ukwenza oku, kufuneka usebenzise ukushisa okwaneleyo kwi-clubhead ukuze udibanise uxhamlo lwe-epoxy phakathi kwe-shaft kunye nentloko.
Isixhobo somlilo okanye itotshi ingasetyenziswa.
Ukuba kukho i-shaft eyaneleyo ekhohliweyo entlokweni ukwenzela ukuba uyenze njalo, faka i-shaft kwisigxina (ukuba utshintshe i-shaft engaphukileyo okanye i-shaft oceba ukuyilondoloza, yithenga umxhasi we-raber ukukhusela umonakalo kwi-shaft). Faka isicelo sokutshatyalaliswa ngokufudumele kwi- hoster (apho i-shaft iqhotyoshelweyo). Emva komzuzu okanye kunjalo i-epoxy iya kuphuka kwaye unokuguqula ikhanda kwisitrha.
Gqoba iiglavu zentshukumo zokukhusela ukutshisa izandla zakho - inxalenye yendawo ephosayo ingafikelela kumaqondo okushisa angaphezu kwama-1 degrees!
Xa i-shaft isuswe, i-epoxy resis eshiywe ngaphakathi kwi-hopper kufuneka ihlanjululwe. Unokuthenga abathengisi be-hosel okanye sebenzisa ifayile ejikelezayo. Xa i-hock ihlambulukile, fakela i-Acetone (okanye ilinganayo) kwi-hopper ukususa nayiphi na igrisi okanye izinto ezifanayo ezikhoyo.
Ukulungiselela iShaft for Installation
Okokuqala, landela isiluleko esicetywayo somenzi.
Emva koko, zilinganisa ubunzulu be-hoster uze ubhale lo mbandela kwi-shaft. Ukuba i-shaft igrafite, qiniseka ukuba ungagxilisi i-graphite ngexesha lokusika njengoko oku kuya kunciphisa i-shaft. Ndicetyisa ukuba ubeke amathanga amaninzi e-masking tape ecaleni kwendawo ekufuneka inqunywe.
Kwi-shaft shaft, susa zonke iipende ukusuka kwinqonga - Ndicebisa ukusebenzisa i-razor knife ukwenza oku - kwaye kwakhona, qaphela ukuba ungonakalisi iifriphite fibers.
Ngomthunzi wensimbi , sebenzisa i-sandpaper enamandla-grit ukuze uthabathe i-tip.
Xa i-hosel ne-shaft sele ikulungele ukufaka ifom.
Hlanganisa i-epoxy yakho kwaye uyifake ngaphakathi ngaphakathi kwendawo, ukuqinisekisa ukuba ugqoke yonke indawo. Emva koko sebenzisa i-epoxy ekupheleni kwe-shaft. Ncotshe i-shaft ngokukhawuleza ibe yindawo, uqiniseke ukuba uguqule i-shaft ngexesha elinye.
Ukuba i-shaft idinga i-ferrule (intsimbi eplastiki encinane ewela phezu kwe-shaft kunye neengqungquthela ngokumelene ne-hosel), faka inani elincinci le-epoxy kwi-shaft tip kunye ne-twist uze uqhube i-ferrule kuze kube yincinci encinane yomthi. Emva koko faka i-clubhead phezu kwe-shaft kwaye, ubeka intloko esandleni sakho, thintela ekupheleni kwe-shaft phantsi uze ude umxube uhleli phantsi kwe-hopper.
Sebenzisa i-rag ethambileyo kunye ne-Acetone ukuze uhlambulule nayiphi na i-epoxy asele kwindawo yokuhlala. Ukuba ufake i-graphite shaft, umgca imifanekiso ye-shaft.
Qaphela ngokucacileyo i-shaft eludongeni kwaye malunga neeyure ezingama-12 i-epoxy iya kupheliswa ngokupheleleyo kwaye unokuqhubeka ukuya kwisinyathelo esilandelayo.
Emva kokuba i-epoxy iphilise ngokupheleleyo, gqiba ixesha elide eliza kugqiba iqela. Sika i-shaft uze ufake ifowuni yakho.
Ukuze ukhethe ngokufanelekileyo ukongeza ifayile, khangela indlela yokubuyisela kwakhona iiKlabhu zeGolf .
Yonke into efunekayo kule nkqubo - i-ferrules, epoxy, njl. - ingathengwa kuyo nayiphi na inkampani yenkampani. Inhlanhla kwaye ujabule!
Malunga noDennis Mack
UDennis Mack yiClass Certified A clubmaker. Wayekhonza njengegalufa kwiComo Golf Club e-Hudson, eQuebec, ukususela ngo-1993-97, kwaye uye waba kwi-golf ye-golf ye-golf ukususela ngo-1997.
Veda Pathshala: Ukugcina i-Vedic Gurukul System
Iinqununu ezili-10 eziLondolozo lwe-Fuel